Mareykanka oo dilay madaxii Maaliyadda Khalaafada Islaamiga ah – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareykanka oo dilay madaxii Maaliyadda Khalaafada Islaamiga ah
A warsame 17 May 2015
Mareeg.com: Mareykanka ayaa sheegay iney howlgal gaar ah ku dieen madaxii maamliyadda Khalaafada Islaamiga ee Suuriya iyo Ciraaq oo la oranjiray Abu Sayyaf.
Howlgalka ayaa la sheegay iney fuliyeen ciidamo gaar ah oo Mareykan ah, kuwaasoo ku degay meel ka mid ah dalka Suuriya.
Xoghayaha Difaaca ee Mareykanka, Ashton Carter, ayaa waxa uu sheegay in dilka sarkaal sare oo ka tirsan Daacish oo ciidammada gaarka ah ee Mareykanka ay ku dileen Suuriya ay tahay dharbaaxo ku dhacday kooxda jihaad doonka ah.
Abu Sayyaf waxaa lagu dilay howlgal qarsoodi ah oo ay fuliyeen komaandoos ka tirsan ciidammada Mareykanka oo helicpter uga soo duulay dalka deriska ah Suuriya ee Ciraaq.
Ninkan ayaa Daacish mas’uul uga ahaa maamulka dakhliga saliida bariga Suuriya, sidoo kalana waxa uu hayay jago dhanka milateriga ah, sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay wasaaradda difaaca ee Mareykanka.
Waxaa la sheegay in ciidammada Mareykanka ay isku dayeen in ay ninkaasi nolosha ku qabtaan balse uu ku dhintay tacshiirad halkaasi ka dhacday.
Waa markii ugu horreysay inta la og yahay oo uu Mareykanku howlgal dhanka dhulka ah ka gaysto gudaha Suuriya, iyagoo weerraraya bartilmaameed kooxda Daacish ah. Xaaskiisa ayaa maxbuus ahaan lagu kaxaystay intii uu socday weerarka.
13-kii vishaan, waxaa duqeyn ka dhacday dalka Ciraaq lagu dilay Amiirka labaad ee Daacish, Abdul Rahman Mustafa Mohammed, oo ku magac dheeraa “Abu Alaa al-Afri”, sida uu sheegay Gen Tahsin Ibrahim oo ah afhayeen u hadlay wasaraadda difaaca Ciraaq.
Kenya oo xirtay nin Muslim ah oo loo heysto inuu dhaqaale ku taageeray Alshabaab
DEG-DEG: Diyaarad ku dhacday deegaan Alshabaab maamulaan